thomas mapfumo on News24
ARTICLES RELATING TO THOMAS MAPFUMO
Zimbabwe’s outspoken musician Thomas Mapfumo has reportedly “pulled a political punch” at his homecoming concert over the weekend when he performed a song critical of the new administration.
Top Africa Stories: Mugabe, Zim nurses strikes
Former President Robert Mugabe, 94, reportedly rejected an invitation to attend Independence Day celebrations, and Scores of Zimbabwe nurses have protested in Harare's central city park.
Zimbabwean musician Thomas Mapfumo has reportedly urged young people to make a stand against the country's current crop of leaders whom he described as "old and unable to bring about any fundamental change".
Zimbabwe’s most popular musician, Thomas Mapfumo has reportedly returned home after a decade in self-imposed exile in the US.
'I don't want to be involved in politics,' Zim's exiled musician says as he returns home
Zimbabwe's most famous musician, Thomas Mapfumo, who fled the country at the height of political repression, has reportedly said that he won't be getting involved in politics, as he prepares to return home after more than 10 years.